India oo lagu cambaareeyay sii deynta shaqsiyaad burburiyey Masjid
India oo lagu cambaareeyay sii deynta shaqsiyaad "burburiyey" Masjid
Eedeysaneyaasha waxaa ku jira afar sarkaal oo xubin sarre ka ah xisbiga taladda haya.
NEW DEHLI, India – Maxkamad gaara kuna taala waqoyga magaalada Hindiya ee Lunknow ayaa Arbacada maanta ah sii deysay 32 kuwaasoo lagu eedeeyay dambi la xiriira burburinta Masjidka Babri ee ku yaala magaalada Ayodhya.
Afar mas'uul sarre kana tirsan xisbiga Hinduuga talada wadankaas haya – Bharatiya Janata Party [BJP] – ayaa ku jira eedeysaneyaasha maxkamadeyntoodu socotay ku dhowaad 28-kii sano ee aynu kasoo gudubnay.
Todoba iyo tobban kamid ahaa 49 eedeysane ayaa si caadiya u geeriyooday mudadii ay socotay geedi u socodka maxkamadeyntooda.
Telefishinka NDTV ayaa wariyey in garsooraha uu sii deynta u cuskaday in aysan xaqiijin karin codad iyo muuqaalo caddeymo loosoo bandhigay.
Garsooraha ayaa intaas ku daray in buburinta loo sameeyay "is-qabqabsiyo bulsheed" aysana muuqan in ay ahayd wax lasoo abaabulay.
Wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan oo si kulul u cambaareysay sii deyntan ayaa ku sifeysay "wax laga xishoodo"; xukuumadda New Dehli ayay xusuusisay in aysan dhiiragelin talaabooyinka wiiqaya dadka laga badan yahay.
Muran lagu kala qeybsamay
Muranka Masjidka Babri oo wali ah mid lagu kala qeybsan yahay isla markaana aad loo siyaaadeeyay ayaa 1992 waxaa burburiyey xagjiriin Hinduu ah kuwaasoo kasoo jeeda ismaamulka waqoyga ku yaala ee Uttar Pradesh.
Taariikhyahanada ayaa sheegaya in dhismahan uu ahaa macbad ay lahaayeen, halka Muslimiinta ay xusayaan in uu Masjid ay ku cibaadeystan.
Rabshado ka dhashay burburinta Masjidka ayaa sababay geerida ku dhowaad laba kun oo ruux kuwaasoo u badan shacab si gaara caruur iyo haween.
Bishii November, 2019, maxkamadda sarre ee Hindiya ayaa ogolaatay in dhismaha laga dhigo Macbad. Bishii Febraayo ee sanadkan, ra'iisul wasaare Narendra Modi wuxuu xusay in dowladda dhameystirtay dhismaha Macbadka.
Macbadka waa mid kamid ah balanqaayadda xisbul xaakimka, waxaana dhegax-dhigay Modi bishii August ee saandkan aynu ku guda jirno. Shaqsiyaadka caanka ah ee dalkaas waxaa lagu dhaleeceeyay in aysan ka hadlin qadiyadan.
Aabe iska bixin waayey deyn lagu lahaa oo gabadhiisa ceeji lagu dilay
Caalamka 14.06.2019. 13:23
Falkan oo caro xoogan abuuray ayaa waxaa qirtay in ay geysteen laba ruux.
Muwaadiniin u dhashay India oo "lahaysteyaal ku noqdey Muqdisho"
Soomaliya 22.10.2020. 21:20
Hindiya oo dambiga ku heshay rag kufsi iyo dil u geysta gabar yar
Caalamka 10.06.2019. 14:11
Pranab Mukherje: Madaxweynihii hore ee Hindiya oo geeriyooday
Caalamka 31.08.2020. 19:40
India oo amaantay kaalinta Puntland ee amniga iyo xasiloonida Soomaaliya
Puntland 25.04.2019. 11:07
Xaalada ajaaniib ku go'doomay Somaliland oo laga deyriyey
Somaliland 13.08.2020. 09:40
Haweenay ajnabi ah oo la hayste ku ahayd Muqdisho oo lasoo furtay
Soomaliya 02.04.2019. 05:54
Dad ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay koonfurta Hindiya
Caalamka 08.08.2020. 08:45